ဘယ်လိုမှ ဖြုတ်/ထုတ်မရတဲ့ BROWSER တွေက "ADWARE SEARCH & TOOLBAR" ပြဿနာ (HOW TO REMOVE ADWARE SEARCH & TOOLBAR) ~ မိုးညိုသား
ဘယ်လိုမှ ဖြုတ်/ထုတ်မရတဲ့ BROWSER တွေက "ADWARE SEARCH & TOOLBAR" ပြဿနာ (HOW TO REMOVE ADWARE SEARCH & TOOLBAR)
4:49 PM နည်းပညာ No comments
အင်တာနက် Browser တွေမှာ ဘယ်လိုမှ ဖြုတ်/ထုတ်မရတဲ့"Adware Search & Toolbar" ပြဿနာကတော့ Free Software တွေ ဒေါင်းယူ Install လုပ်ရင်း အလိုလျှောက် ကွန်ပျူတာထဲကို ရောက်သွားတာပါ.. တခြား Adware and hijacker Search & Toolbar တွေဖြစ်တဲ့ ..
ဒီလို မလိုအပ်တဲ့ Toolbar တွေကြောင့် Browser တွေမှာ လေးလန် နှေးကွေးစေခြင်း ၊ Search bar တွေ New Tab တွေ Home Page တွေမှာ Google ကို အရင်လို ထားမရတော့ခြင်း စ,တဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်လာစေပါတယ်..။
နောက်ပြီး ဒီ Adware Toolbar တွေက စက်ထဲ Install လုပ်မိရင်လည်း ဘယ်လို ထုတ်ထုတ် တော်ရုံထုတ်မရတတ်ပါဘူး...
ခုမှ စ,ပြီး အင်တာနက် ကွန်ပျူတာကို လေ့လာစ လူတွေ အမြဲကြုံတွေ့တတ်တဲ့ ပြဿနာပါ....
ဒီနေ့တော့ ညီလေးတစ်ယောက်ရဲ့စက်မှာ "Snap.do search"& "Snap.do toolbar" ကို လက်တွေ့ ထုတ်ပေးရင်းအတွေ့ ဖြေရှင်းနည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။
ဖြေရှင်းနည်းကတော့ တော်တော်လွယ်ပါတယ် .. မသိသေးခင် , ရှာမရသေးခင်သာ ခတ်တာပါ... :D
1. ပထမဆုံး ဒီ Software လေးကို ဒေါင်းယူပြီး Run လိုက်ပါ..။ (Support Windows XP/Vista/7/8 ) (Download and Run JRT JRT – Junkware Removal Tool.)
2. အောက်ပုံအတိုင်းတတ်လာရင် ကီးဘုတ်ပေါ်က Key တစ်ခုခုကို နှိပ်ပေးပါ..။ ( Press any key to start scanning your computer)
3. စောင့်နေလိုက်ပါ သူ့ဘာသာသူ System မှာ Scans and Cleans လုပ်နေပါလိမ့်မယ် ။ (Be patient until JRT scans and cleans your system)
4. အောက်ကလို Notepad ဖိုင်လ်လေးတတ်လာရင် ပိတ်ပြီး စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ..။ (Close JRT log file and and then reboot your computer.)